"Joogtaynta Camalka Yar Janno ayaa lagu helaa, sida laga soo weriyay Nebi Maxamed " Sh. Dirir - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
“Joogtaynta Camalka Yar Janno ayaa lagu helaa, sida laga soo weriyay Nebi Maxamed ” Sh. Dirir
Hargeysa(ANN)- Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland, ayaa bulshada ugu baaqay in joogtaynta camalka wanaagsan haba yaraadee, lagu helo jannada, sida laga soo weriyay Nebigii suubaanaa ee Maxamed CSW ee Islaamka ugu bushaareeyey.
Khudbadii Jimcaha manta (shalay) oo Sh Dirir kaga hadlay muhiimada in ummada Islaamku sii adaan cibaadadii ay gudan jireen bishii Ramadaan ayuu ku bilaabay,
“Khudbadeenu waxay ku saabsan tahay in camalkii wanaagsanaa ee bishii Ramadaan aynu soo gudanay inaynu sii joogtayno, taasoo diinteena Islaamku dhiirigeliso joogtaynta camalka wanaagsan. Nebi Maxamed CSW , waxuu xadiis innoogu sheegay macnahiisu yahay, “Camalka Ilaahay waxuu ugu jecel yahay kuu joogteeyo,” waxuu Nebigu CSW isagoo asxaabtiisa ku tarbiyadeynaya waxuu ku dhiirigelin iray joogtaynta camalka wanaagsan. Maalin Nebiga CSW oo asxaabta la fadhiya ayaa afar su’aalood weydiiyey, afartii su’aaloodba saxaabiga Abuu Bakar SC ayaa ka awaabay oo ku guulaystay. Qofkee jinaaso ka qeybgalay saaka? Isagoo sooman waagu u beryey, Qof miskiin ah wax siiyey, Qof buka soo booqday? Xidhiidhkii Ilaahay oo lagu hagaajinayo xidhiidhka muuslimiinta, intiiba Abu Bakar CS ayaa yidhi waan sameeyey. Intaasi qofkii ay ku kulmaan waa ehlu-janno ayuu Nebigu CSW yidhi.
Mar kale oo Nebigu CSW Cabdullaahi Binu Cumar ibnu caas, waxuu yidhi “Cabdullaahoow, ha noqon sida hebel, oo salaada tukan jiray, ka dibna iska daayey’, waa hadal innaga innagu socda ha noqonina adoomadii taraawiix iyo tahajud tukan jiray Ramadaan, dabadeedna iska daayey.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in tusaalayaasha sare u taagan yihiin sidii Nebi Maxamed CSW ugu dhiirigelin jiray saxaabada iyo ummada islaamka joogtaynta camalka wanaagsan, caabudaada Ilaahayna aanay xilli ku koobnaan, sida Ilaahay SW quraanka innoogu sheegay “Ilaahay caabud ilaa geeridu kuu imanayso”.